ကောင်းကင်ဖြူ: July 2012
မိုးတွေ တစ်သိမ့်သိမ့် ရွာနေတဲ့ ညတစ်ည ပေါ့ ။ အချိန်ကာ ည ၁၁ နာရီ ကျော် …. အသက်တစ်ခုကို ရင်း သွေးစက်တွေ ကို ခင်းစေပြီး ဘဝဆိုတဲ့ လောကကြီးထဲကို ကျနော် ရောက်စေခဲ့ပါတယ် ။ အခြေမခိုင် တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို မိဘ ဆိုတဲ့ ကြင်နာနွေးထွေးမှု့ တွေကြောင့် တဖြည်းဖြည်း ခိုင်ခံလာစေခဲ့ပါတယ် ။ မကြာမကြာ လဲကျတိုင်းလည်း မိုးကောင်းကင်ကြီးလို အုပ်မိုးပေးတက်တဲ့ အမေ့ရင်ခွင် ….. ။
ဒီလိုနဲ့…… အဖေ ပေးတဲ့ ရာဇဝင်သူရဲကောင်း တစ်ဦး နာမည်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ….. ကျနော် လောကကြီးထဲမှာ စမ်းတဝါးဝါး လျှောက်သွားလိုက်တာ ……. အချိန်တွေကိုပဲ စားပစ်တာလား ၊ အချိန်တွေ ကပဲ ကျနော် ကို စားပစ်တာလား မသိ ၊ အချိန်တွေ ကုန်လွန်ခဲ့ရပြီ … ။
ဖြစ်တည်ရာ ဘဝ မှာ တစ်ခါတလေပေါင်းများစွာ နဲ့ပျော်ရွှင်လိုက် ၊ ဝမ်းနည်းလိုက် ၊ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ အရောင်တောက်လာလိုက် ၊ အရောင် ပျောက်သွားလိုက် နောက်ဆုံး …. နောက်ဆုံးတော့ အမေ့ရင်ခွင် နဲ့ဘုရားရိပ် လောက် အေးချမ်းတဲ့ နေရာ ရှာမတွေ့ ခဲ့ပါဘူး … ။
ဒီလိုနဲ့ ……… ဒီနေ့ဆိုရင် ၂၉ နှစ် အကြာရောက်ခဲ့ပါပြီ … ။ ဘဝဆိုတဲ့ အချိန်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၉ နှစ် ဘယ်နှကြိမ်များ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိမည်လော … ။ “ သဘာဝ ပါ သားရယ် ” လို့ ပြောတဲ့ အမေ့မျက်ရည်တွေကို ရင်နာနာ နဲ့ကျောခိုင်းမိခဲ့တာ လည်းကြာခဲ့ပါပြီ ။ အခုထိ လိုအပ်ခြင်းတွေ ရှိနေဆဲပါ ။ အင်း …… ရှိစေတော့ …. အရှိကို အရှိတိုင်းထား ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၉ နှစ်က ဒီလိုနေ့ မှာ အမေ့ရဲ့ အသက်နဲ့သွေးတွေကို ရင်းပြီး မွေးထုတ်ပေးခဲ့ တဲ့ အမေ့ ကျေးဇူးတွေကို ဘယ်လိုမှ ဆပ်လို့မကုန်နိုင်မှန်း သိပင်မဲ့ ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်ထိတော့ ကြိုးစားချင်ပါတယ် … အမေ ။
အမေရှိရာအရပ်ကို မှန်မျှော်လို့ထာဝစဉ် ရှစ်ခိုးဦးချ လျှက်ပါ အမေ …. ရယ် …. ။
အဝေးရောက် အမေ့ သားကတော့ ဒီနေ့ညမှာ မိုင်တိုင် ၂၉ ကိုအောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါပြီ ….. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 12:06 PM 13 comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 10:12 AM 11 comments
ကားဆေးအရောင် ပျက်စီးစေခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း အပိုင်း ၂
မင်္ဂလာပါဗျာ … ။ ကျနော် ကားအကြောင်းတွေ မရေးဖြစ်တာတော်တော် ကြာသွားပါပြီ ဒီနေ့တော့ ရေးလက်စ ကားဆေးအရောင် ပျက်စီးစေခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း အပိုင်း ၂ ကို လက်စသတ် ပါမယ် ။
ကားတစ်စီးရဲ့ ဆေးအရောင် ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းရာတွေထဲမှာ ဖြစ်များတဲ့ အကြောင်းရာ နှစ်မျိုးကို ပထမ post မှာရေးခဲ့ပြီပါပြီး ။ အခု နောက်ထပ် ဆေးအရောင် ပျက်စီးစေတဲ့ ကြောင်းတွေထဲမှ မကြာမကြာ တွေ့ ရတဲ့ အကြောင်းရာ တစ်မျိုးကို ပြောပြပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းရာ ကတော့ ပေါ်လစ် (Car Polish ) ကြောင့် ပျက်စီး စေခြင်းပါပဲ ။
ပေါ်လစ် (Car Polish ) ကြောင့် ပျက်စီးခြင်း
Car Polish ဆိုတာ ကားတစ်ရဲ့ ဆေးအရောင်ကို တောက်ပအောင် ပြုလုပ်ရာမှာ အများစု အသုံးပြုကြပါတယ် ။ အမှန်တော့ Car Polish ဆိုတာ ဆေးအရောင် တောက်ပ အောင်အသုံပြုတာထက် ၊ ဆေးအရောင် ပျက်စီစေမှု ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါပဲ … ။ ဒါပင်မဲ့ ကားဆေးအရောင် ပျက်စီးစေတဲ့ ကြောင်းရာတွေထဲမှာ Polish ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ကားတွေ ကို မကြာမကြာ တွေ့ ရပါတယ် ။ Car Polish ကြောင့် ဆေးရောင် ပျက်စီး တဲ့ကားတွေမှာ Polish ကို မသုံးတက် တာကြောင့် ဆေးရောင် ပျက်စီးရတယ် ဆိုလည်းတွေရပါတယ် ။
polish ဆိုတာ paste compound တစ်မျိုးပါ ။ Metallic ကားဆေးရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ paste ဖြစ်တာကြောင့် paste compound ဖြစ်တဲ့ Polish အသုံပြု ခြင်းဖြင့် ဆေးရောင်ကို ခဏတာ တောက်ပ စေတာပါ ။ အသုံးပြုတဲ့ Polish အမျိုးအစား မမှန်ရင်တော့ ကားဆေးရောင် ကို ပျက်စီးစေပါတယ် ။
အများအာဖြင့် Car Polish ဆိုရင် တူတူပဲ လို့ ထင်ကြပါတယ် ။ ဈေးကွက်မှာ တံဆိပ် အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ Car Polish များကို အခြေခံအားဖြင့် အမျိုးစား သုံးမျိုးခွဲထားပါတယ် ။
၁ ။ ပေါ်လစ် အကြမ်း ( Remover Paste … လို့တံဆိပ် မှာ ရေးထား တက်ပါတယ် )
၂ ။ ပေါ်လစ် အနု (Removes light …. လို့တံဆိပ် မှာ ရေးထား တက်ပါတယ် )
၃ ။ ပေါ်လစ်အရည် (Remover Cleaner ….. လို့တံဆိပ် မှာ ရေးထား တက်ပါတယ် )
ဒါ့အပြင်3in 1 / (3M ) ဆိုပြီး သုံးမျိုးပေါင်းစပ်ထားတာလည်း ရှိပါတယ် ။ ကျနော် သုံးပြုပုံကို ရှင်းပြပါမယ် ။ ပေါ်လစ်အကြမ်း ကို သုံးရာမှာ ကားတစ်စီးကို ဆေးပြန်မှုတ်ပြီးတဲ့အချိန် ဆေးမှာ ပါတဲ့ အမှိုက်ကြောင့် ဖြစ်စေ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကျရောက်တဲ့ အမှိုက်ကြောင့် ဖြစ်စေ ကား ရဲ့ မျက်နှာပြင် မှာ အဖု လေးသေးသေး လေးတွေ ဖြစ်သွားတက် ပါ တယ် ။ အဲ့လို အမှိုက်တွေ ရှင်းတဲ့နေရာမှာ ပေါ်လစ်အကြမ်း ကို သုံးပါတယ် ။ နောက်တစ်ခုက မိမိရဲ့ကားမျက်နှာပြင် မှာ တစ်ခုခုနဲ့ထိမိလို ဆေးပေါက်မသွားပဲ အဆင်းကြောင်း တွေ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် ဒီလို အဆင်းကြောင်းတွေကို မှုလဆေးရောင်တိုင် ဖြစ်စေမို့ပေါ်လစ်အကြမ်း ကိုသုံးပါတယ် ။
ပေါ်လစ်အကြမ်း ဟာ ကားဆေးရဲ့ မျက်နှာပြင် paste ကို ပျော့သွား သည်အထိ Chemical အားပြင်းပါတယ် ကျနော်အထက်မှာ ပြောသလို အမှိုက်တွေ ၊ အဆင်းကြောင်းရာတွေ ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်း ရှိပင်မဲ့ ၊ ဆိုးကျိုးအနေနဲ့မိမိကားဆေးရဲ့ မျက်နှာပြင် ပါးသွားစေပါတယ် ။ colour effect ကို ပျက်စီးသွားစေပါတယ် ။ လိုအပ်လို့အသုံပြုမယ် ဆိုရင် သင့်တော်ပင်မဲ့၊ မလိုအပ်ပဲ မိမိကားကို ဆေးအရောင်လေး တောက်စေချင်လို့ပေါ်လစ်တိုက် တဲ့နေရာမှာ ပေါ်လစ်အကြမ်း ကိုသုံးမိမယ် ဆိုရင်တော့ မိမိကား မှာ colour effect ပျက်စီးသွားစေ သလို ။ ဆေးပါးသွား တာကြောင့် ရက်ပိုင်းအတွင်း မိမိကားရဲ့ ဆေးရောင်တက်ပမှု့ဆုံးရှုံးရစေပါတယ် ။ ရက်ကြာလာတာနဲ့မိမိကားမှာ အဖြူရောင်သန်းလာပါတယ် ( ဥပမာ အနီရောင် ကားဆိုရင် ပန်းရောင်း ဖြစ်သွားပါတယ် ) ။
နောက်တစ်မျိုးက ပေါ်လစ် အနု ပါ ။ မိမိကားဆေးမျက်နှာပြင်မှာ အစက်ပျေက်တွေ အကွက်တွေ ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ် ။ မလိုအပ်ပဲ အသုံးပြုလို့မသင့်ပါဘူး ပေါ်လစ်အကြမ်းလောက် Chemical အားမပြင်းပင်မဲ့မကြာမကြာ မလိုအပ်ပဲ အသုံပြုမယ်ဆိုရင် ပေါ်လစ်ကြမ်းလို ပဲ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ ပေါ်လစ် အရည်ပါ ။ မိမိကား ဆေး မျက်နှာပြင်မှာ အကွက်များနဲ့ဆေးအရောင် တောက်ပအောင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ ဆေးအရောင် ကျနေတဲ့ ကားပဲ အသုံပြုသင့်ပါတယ် ။ ဆေးအသစ် ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူလည်း အထက်ပါ အမျိုးစားတွေလို ပဲ မိမိကားဆေးအရောင် ကို ပျက်စီးစေပါတယ် ။
ကာတစ်စီးကို ပေါ်လစ် ဘာကြောင့် အသုံပြုရလည်းဆိုရင်တော့ ။ အကြောင်းရာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ။ မိမိကားဆေးမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရှိလို့ နဲ့ဆေးရောင် အကျနေလို့အသုံပြုတာ များပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောစရာရှိပါတယ် ။ မြန်မာပြည်က ဆေးမှုတ်တဲ့ အလုပ်ရုံ တော်တော်များများ မှာ ကားတစ်စီးကို ဆေးပြန်မှုတ်ပြီးရင် ပေါ်လစ် တိုက်ပါတယ် ။ အများစုဟာ ဆေးမှုတ်ခန်းဆိုတာ သီးသန့်မရှိတဲ့အတွက် ဆေးမှုတ်နေရာ မှာ ဆေးမခြောက်ခင် အချိန်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှ အမှုံများ အမှိုက်များ ကျရောက်စေသည့်ပါတယ် ။ ဒီလို အမှုံတွေ အမှိုက်တွေ ဖယ်ရှားတဲ့နေနဲ့အသုံပြုတာပါ ။ ဆေးမှုတ်တဲ့ နေရာသီးသန့် ထားပြီ အမှုံအမှိုက် မကျရောက်စေတဲ့ နေရာဆိုရင်တော့ အကာင်းဆုံးပါပဲ ။
ဆေးအရောင်ကျနေတဲ့ ကားအတွက်တော့ မိမိရဲ့ကားဆေးအရောင်ကို ထိန်သိမ်းတဲ့ အနေ နဲ့အသံုးပြုသင့်ပါတယ် ။
ကျနော် တို့ က လိုအပ်လို့မိမိကားမှာ ပေါ်လစ် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကားကို ရေအရင်ဆေးရပါမယ် ။ ကား body ပှုနေမယ် ဆိုရင် အေးအောင်စောင့်ရပါမယ် ။ စက်သတ် ထားရပါမယ် ။ ရေဆေးတယ် ဆိုတာကတော့ ပေါ်လစ်တိုက်တဲ့ နေရာမျာ သဲ ပါမှာစိုးလို့ ပါ ။ ပေါ်လစ်ဟာ ကားဆေးမျက်နှာပြင်ပျော့ သွားစေတာကြောင့် အပူ ရှိနေရင် ပိုပြီပျော့သွားမှာဖြစ်လို့body ကိုအေးအောင်လုပ်ပြီး စက်သတ်ထားရတာပါ။ ဒီလောက်ဆို လိုအပ်သလို အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ ။
ပေါ်လစ် အနုရော အရည် ရော မှာ Chemical နည်းတဲ့အတွက် အချိန်တို အတွင်း သိသိသာသာတော့ ပျက်စီးစေခြင်းမရှိပါဘူး ။ ပေါ်လစ် အမျိုးစားအားလုံးကို မလိုအပ်ပဲ မကြာမကြာ အသုံးပြုမယ် ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် မိမိကားဆေးရောင်မှာ ပါရှိတဲ့ colour effect ကို ဦးစွာပျက်စီးစေပါတယ် ။ rainbow effect လိုအရောင်ပြေး effect တွေမှာ သိသိသာသာ မဟုတ်ပင်မဲ့ ၊ ctystal effect အမျိုးစားဆိုရင်တော သိသိသာသာကို ပျက်စီးတာတွေ့ ရပါတယ် ။
နောက်တစ်ခုက မလိုအပ်ပဲ မကြာမကြာ ပေါ်လစ် အသုံးပြုတာကြောင့် မိမိကားဆေးရဲ့ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ paste ကို ပါးသွားစေပါတယ် ။ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ဆေးအရောင် ပျယ်တဲ့ ဆင့်ကိုရောက်သွားပြီး ပျက်စီးစေတာပါပဲ ။
ဒါကြောင့်မို့ လို့ပေါ်လစ်ဟာ အသုံးပြုတာ မှန်ကန်ရင်တော့ မိမိကားရဲ့ဆေးအရောင် ကို ထိန်းသိမ်း နိုင်မှာ ဖြစ်သလို ၊ အသုံးပြုတာ မမှန်ရင်တော့ မိမိကားဆေးအရောင်ကို ပျက်စီးစေပါတယ် ။ မလိုအပ်ပဲ ပေါ်လစ်မကြာမကြာအသုံးပြုခြင်း ဟာ မိမိကားရဲ့ ဆေးရောင် တောက်ပမှု့ ကို ထိန်းသိမ်း တာမဟုတ်ပါဘူး ။ မိမိကားရဲ့ ဆေးအရောင် တောက်ပမှု့ကို ပျက်စီးသလို ဖြစ်တက်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ် ။
ဓာတ်ပုံကို google မှရယူခဲ့ပါသည် ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 12:04 PM5comments
Labels: ကားဆေးအရောင် ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း
မုဒိတာ ...... ။
မိုးထက် ယံသို့ 
မုဒိတာ ……. ။
ရင်သား မြတ်သို့ 
မုဒိတာ …… ။
လျှမ်းလျှမ်း ပျို လျှင်
မြတ်မဟာ ပွဲ ကို
မုဒိတာ ….. ။
ကျနော် တို့မြန်မာ မုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ မှ တတိယအကြိမ် အလှုပွဲအတွက် ပြင်ဆင်
ထားပါတယ် ... ။ ပထမ နဲ့ဒုတိယ အကြိမ်များလို ပါဝင် လှုဒါန်း ကြပါအုံးလို့အသိပေး အပ်ပါတယ် ... ခဗျာ ...... ။
အလှုအကြောင်းရာ အပြည့်စုံကို မြန်မာ မုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ ရဲ့ ဆိုက်မှ ပြန်လည်မျှဝေပါရစေ ... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 10:09 PM5comments
ခါတော်မှီ ရွှေဖီခူးမို့ 
တောင်ယံဆီ လှမ်းလို့ ပျော် ….. ။
မြိုင်ယံလယ် ရွှေဖီခင်း ဝယ်
ရွှေဖီသူ နွဲ့ နွဲ့ဟန်က
ချည်လက်ရှည် ရယ် ထမီတို
ခမောက်ငယ် နဲ့ပလိုင်းဆင်
ကပိုကရို လှကွက်ချယ်တယ် …… ။
ရောင်နီဖြာ အပူသန်း ပြန်တော့
ရွှေအဆင်းချယ် သနပ်ခါး မှာဖြင့်
ရွှေဖီသူ မောရရှာလို့ 
ချွေးစို့ကာ စိုရရှာလည်း
လေအဝှေ့မှာ အေးရပြန်သည် …. ။
မဖြေသာဘူး ရွှေဖီသူရယ် ….
တပြည်ဆီက မောင့် ရင်မှာ
ရွှေဖီမြေက နှင်းတွေ လို
မှိုင်းအုံ့ အုံ့ပေါ့ ….
ရွှေဖီမြေမှ ချစ်ရ သူရယ် ………. ။
ရွှေဖီသူ (သို့ ) ကျနော်ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ကောင်းကင်ဖြူ
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:18 AM9comments
ကားဆေးအရောင် ပျက်စီးစေခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ...